Gabdhaha is-qabadsiinta: maxay yihiin, sifooyin noocee ah ayey leeyihiin iyo tusaalooyin | Abuurista khadka tooska ah
Xaqiiqdii weligaa ma maqashay ama akhriday ereyga pin-up. Waxaa laga yaabaa inaad awood u yeelatay inaad ku aragto qaar ka mid ah sawirrada gabdho biinanka-internetka ah oo soo jiitay dareenkaaga. Laakiin dhab ahaan, waxa laga yaabo inaadan ogeyn waa sawirkaas, sawirka, sawirku dhab ahaantii wuxuu ahaa xaq u lahaanshaha haweenka.
Waana taas in gabdhaha pin-upka loo tixgeliyey "gabdho caasiyoobay." Laakiin dhab ahaantii waxaa jira sheeko ka dambeysa oo laga yaabo inaad u baahan tahay inaad ogaato haddii waqti kasta oo sawirradan ay xiiseeyaan. Miyaan kuu sharxi karnaa adiga oo ku labista tusaalooyin muuqaal ah?
1 Waa maxay micno-u-dhigashada
2 Asalka gabdhaha pin-upka
3 Astaamaha hablaha soo jiidan
3.1 Akhlaaqda hablaha pin-upka
3.2 Timaha xiiran
4 Gabdhaha is-qabsada
Waa maxay micno-u-dhigashada
Ereyga pin-up waxaa loola jeedaa sawir, badanaa haweeney, oo, leh dareen, muuqaal soo jeedin ah, ama u eegaysa ama u dhoola cadeyneysa si xun, waxay qabaneysaa dareenka daawadayaasha. Ereygan ayaa soo muuqday waqti ka hor iyo, in kastoo ay u muuqan karto "naanays" dadkaas u heellan in lagu sawiro ama lagu muujiyo qaabkan, runtu waxay tahay in si joogto ah loogu isticmaali jiray joornaalada, kalandarka, boodhadhka, iwm. Isbaanishka, tan waxaa loo tarjumi karaa "gabar joornaal ah", "gabar taariikheed" ...
Laakiin maxay ka dhigan tahay inaad tahay gabar pin-up ah? Hagaag, waa inaad ogaataa in "pin" macnaheedu yahay pin; halka "kor" waa kor. Laba erey oo Ingiriis ah oo midowgooda u yimid samaynta ereyga "derbiga sudhan". Sababtaas awgeed, dhammaan sawirrada, kalandarka, kaararka boostada, sawirrada… oo lagu xardhay darbiga, sidoo kalena lahaa aragti soo jeedin, daandaansi ah… waxaa loo tixgeliyey inay tahay boodhadh.
Hadda, kuwa ugu caansan waa gabdho isku-xirxira laakiin, dhab ahaantii, waxaa sidoo kale jiray sawirro iyo sawirro rag, oo tiro yar. Oo ma ogtahay in aan had iyo jeer loogu yeerin gabdho pin-up ama wiilal pin-up ah? Hagaag, maya. Muddo dhawr sano ah ayay heleen naanayste kale, oo ka foolxun uguna edeb daran, sida "jiiska", ama Isbaanishka ah, "jiis jiis", marka laga hadlayo dumarka; iyo "hilibka lo'da", ama rootiga hilibka, marka laga hadlayo ragga.
Asalka gabdhaha pin-upka
Si loo ogaado asalka gabdhaha biinanka ku xiran waa inaan dib ugu noqonaa 1920. Gaar ahaan, Mareykanka. Waqtigaas, dumarka aad baa loo cabudhiyey, taasi waa, haddii ay ku kacaan wax ka baxsan caadada, way ku waji gabaxeen. Waqtigaasna waxaa jiray haween doonayay inay ka baxaan qorshayaashaas oo ay bilaabaan inay haweenka awood siiyaan. Marka, sawirrada iyo boodhadhyadu waxay bilaabeen inay la muuqdaan gabdho si khaldan u labbisan, oo si khiyaano leh, akhlaaq xumo ah iyo haa, wax galmo sidoo kale. Dhagaystayaashiisa bartilmaameedka ahaa wakhtigaas waxay ahaayeen askar dhalinyaro ah, maadaama ay tixgeliyeen in muuqaalada noocan ah ay u adeegeen si kor loogu qaado niyadda (ama wax kale) waana taas sababta keentay in muuqaallo badan lagu arko noocyada sawirrada ah ee filimada.
Intaa waxaa dheer, nooc kale oo ka mid ah sababta loogu yeeray gabdhaha is-qabta ayaa ah tan, xaqiiqda ah inay u adeegeen inay "kor u qaadaan niyadda" askarta, ama ay ka dhigaan "pin" inuu kor u kaco.
Intii lagu jiray 20-meeyadii iyo 30-yadii, noocyada daabacaadda (sawirrada, sawirrada, boodhadhka, joornaalada…) waxay bilaabeen in loo qaybiyo raxan raxan. Marka hore, waxaa ka mid ah askarta Mareykanka, laakiin waxyar kadib markii dhagaystayaasheeda la ballaadhiyay.
Waana in 40-kii iyo 50-meeyadii gabdhihii pin-up-ka ahaa ay ahaayeen moodooyin koraya. Tobankaas sano (40-meeyadii) waxay ahayd markii Dagaalkii Labaad ee Adduunka qarxay dhammaan askarta Mareykankuna waxay wateen sawirrada gabdho isku-xirxiraya maxaa yeelay waxay noqdeen nooc astaan ​​waddaniyadeed iyo "talisman" inay ku noqdaan dalkooda. Xaqiiqdii, kuma ekaan oo keliya gidaarrada jiifka ama santuuqyadooda; Meel kasta ayey ku qaadeen, xitaa diyaaradaha dagaalka, maxaa yeelay aad ayey muhiim ugu ahaayeen iyaga.
Horeba 50-meeyadii, maxaa yeelay waxaa jiray sawirro aad u tiro badan, sawirro ... suuqa ayaa ku dhammaaday inuu burburo, iyo in wixii ay qabatay ay noqdeen kuwo xiiso leh. Dadku aad ayey u arkeen iyaga in badan oo aysan mar dambe soo jiidanaynin dareenka qofna sababtaas darteed, qaar ka mid ah gabdhahaas biinanka kor u qaadaya, ama wiilasha, waxay bilaabeen inay ka shaqeeyaan qaybaha kale, ama xitaa inay naftooda u hibeeyaan shineemo, stiptease ama kuwa ugu badan ee la soo rogay joornaalada codka, sida «Ciyaar Wiilka». Xitaa intaa ka sii badan markii 60-meeyadii qaawanaanta iyo dhar la'aanta aan mar dambe laga mamnuucin sawirada. In kasta oo waqtigaas ay u dhawaatay in la waayo, illaa sanadkii 2014-kii ayay haddana mooddo noqotay.
Astaamaha hablaha soo jiidan
In lagu tixgeliyo mid ka mid ah kooxihii gabdhihii isweydaarsaday xilligaa kor u kaca waxay ahayd ammaan dadkaas. Waxayna la mid ahayd ragga. Laakiin inay sidaa ahaato, waxay ahayd inaad matasho astaamo taxane ah oo qeexaya dadkaas. Kuwanuna waxay ahaayeen kuwan soo socda:
Akhlaaqda hablaha pin-upka
Sidaan kuu sheegnay, noqoshada gabadh biin-saar ah waxay la macno tahay inaad jebiso xeerka, oo aadan dan ka lahayn inaad sameyso ama waxay oran doonaan. Sidaa darteed, waxay ahayd inaad noqotid haweeney aad isku kalsoon, oo leh kalsooni sare oo aan dhib ka qabin sasabashada, dhiiranaanta, basbaaska, xitaa xumaanta, had iyo jeer leh xarrago iyo soo jiidasho, maxaa yeelay waxa kaga duwanaa noocyada kale ee haweenka ayaa ah ha ku dhicin xumaan. Si kale haddii loo dhigo, waxay uga tageen malabka bushimahooda markay tilmaamayaan iyo soo jeedinayaan, laakiin iyagoon intaa sii dhaafin.
Mowjadaha, siddooyinka, iyo xitaa taabashada ayaa astaan ​​u ahaa calaamadaha gabdhaha soo jiidashada leh. Marka lagu daro midabada timaha, in kastoo tani aysan ahayn wax caadi ah. Xaqiiqdii, waxaa jiray brunettes iyo blondes, laakiin madax-cas ayaa loo adeegsaday inuu soo jiito dareenka dad badan sababtoo ah midabkaas aan caadiga ahayn.
Intaa waxaa dheer, waxay ku qurxin jireen timahooda qaansooyin iyo qalab kale si ay u siiyaan taabasho midab ah, gaar ahaan markii ay ahayd "caadi."
Dhanka qurxinta, gabdhaha biinanka isticmaala wax yar bay isticmaali jireen, had iyo jeerna waxay ku saleysnaayeen keenista iftiinka wajiga iyo qeybaha jirkooda ee la arkay. Meeshii ay inta badan doonayeen inay ku xoojiyaan "soojiidashadooda" waxay ahayd bushimaha iyo indhaha. Tan awgeed, waxay u doorbideen sida midabka madow ee indhahooda, oo leh qeexitaanno dhaadheer oo ku jira safafka indhaha, waxayna si wanaagsan u qeexeen sunnayaasha waxayna kordhiyeen baarkooda howsha.
Sida dibnaha, midabka ugu caansan wuxuu ahaa casaan.
Ama yaraantiisa. Waana markii sanadihii la soo dhaafay "qaawinta" ay astaamo u ahayd sawirradan. 20-meeyadii, dharka hiddaha iyo dhaqanka waxay soo bandhigeen qaybo ka mid ah jirka dumarka, laakiin iyadoon intaas laga sii dheerayn. Si kastaba ha noqotee, waxyaabihii 40-ka ahaa ayaa isbedelay, gaar ahaan iyadoo la adeegsanayo sawirro halkaas oo farshaxanlayaashu ay mala-awaalkooda "u duulaan" xoogaa ayagoo dib u soo ceshanaya dumarka dharkooda xiran (maahan iyaga la'aanteed, laakiin gaaban oo adag).
Sidoo kale sawirada dhabta ah lagama tagin, tan iyo markii ay muujiyeen gabdho madaxbanaan, awood leh oo isku kalsoon, laakiin dharka fudud. Xaqiiqdii, sawiradan ayaa loo isticmaalay in "wax lasiiyo" kuwa ku qanacsan, ama qaab qaab ah shaqooyinka suuragalka ah.
Ugu dambeyntiina, waxaannu kaaga tagaynaa xul xul ah oo sawirro ah oo gabdho isa soo bartay ah. Waana magacyada sida Elke Sommer, Janet Leigh, Bettie Page, Betty Grable ama Ann Savage waxay la xiriiraan dhaqdhaqaaqan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Gabdhaha is-qabsada